Dayactirka Bios | Meeshaada si aad uga fogaato khaladaadka oo aad u ilaaliso kombayutarkaga mid ammaan ah
Sida loo akhriyo oo loola falgalo shaashadda adoo isticmaalaya mouse gudaha Windows 10
Soo deji Quruxda Norway Windows 10 Theme
Sida loo hagaajiyo AsusTPcenter.exe Sawirka Xun Windows 10
Sida loo isticmaalo Ok Google maalin kasta | Isku hagaaji qalabkaaga sida ugu dhakhsaha badan
Ok Google waa aalad loo isticmaalo maalin kasta, kaas oo aad si fudud ugu maamuli karto mobilkaaga, aaladaha adeegsada kaaliyaha waxa loo kala saaraa laba nooc: Aaladaha ku jira ok google Devices oo...
Hadda, qalabka elektarooniga ah wuxuu leeyahay faylal iyo codsiyo loo abuuray qaabab kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, marka barnaamijka akhristaha uu maqan yahay, suurtagal maaha in la qabto hawlo gaar ah ama laga eego faylasha qaar ka mid ah browserka webka ee aad door bidayso. Tani waa kiiska faylalka ...
Waxay u badan tahay inaad mar isku dayday inaad hesho ciwaanka IP-ga ee qof oo aad ku guuldareysatey. Si kastaba ha ahaatee, macluumaadka aad ku akhrin doonto maqaalkan, waxaad ku ogaan doontaa sida loo helo IP-ga qof dhowr ilbiriqsi gudahood ...
Maalmahan, badi ciyaaraha fiidyowgu waxay taageerayaashooda siiyaan awoodo garasho oo cusub. Taasi waa, waxay u oggolaadaan inay horumariyaan xirfadaha la xidhiidha habaynta macluumaadka, taas oo macnaheedu yahay isticmaalka xusuusta, dareenka, aragtida, ...
Currently, waxaa jira dhowr nooc oo qaabab for drives adag iyo unugyada kaydinta ee kombiyuutarada Mac OS. Mid ka mid ah qaababka aadka loo isticmaalo waa NTFS oo maqaalkan waxaan ka hadli doonaa arrintan. Marka xigta, waxaan sharxi doonaa sida ...
Ogow haddii nambar xanniban uu ku soo wacay
Haddii aad isku aragto in aad akhrinayso maqaalkan, waxaa sabab u ah marar badan oo aad is weydiisay su'aasha soo socota: Sidee ku ogaan kartaa in nambarka xiran uu isoo wacay? Nasiib wanaag, maanta waxaad heli doontaa jawaabta oo waxaad awoodi doontaa inaad ogaato dhammaan beddelka aad haysato ...
Sida loo koobiyo CD-ga PC-gaaga
Ku-koobiynta CD-ga PC-ga waxay ahayd wax si joogto ah loo sameeyo, maadaama aysan jirin siyaabo badan oo macluumaadka loo kaydiyo. Si kastaba ha ahaatee, sida wax walba u horumareen, tani dadka qaar ayaa ilaabay ...
Codsiyada nuqul ka ah xiriirada ka iPhone in SIM
Haddii aad u baahan tahay in la dhoofiyo xiriirada iPhone in SIM oo aad dareentay in aanay jirin wax ikhtiyaar ah oo this, waa in aad ogaato in ay suurtogal tahay in la sameeyo by rakibidda codsi. Waxa ugu fiican ee ku saabsan doorashadan ayaa ah in aad tirtiri karto codsiga ku rakiban hal mar...
Sida loo uninstall Fortnite
Marka laga soo dejiyo codsiyada kombiyuutarka oo aan la isticmaalin habka saxda ah, waxaa badanaa jira faylal dabacsan kuwaas oo qaata meel bannaan oo saameeya shaqadiisa. Burburinta ciyaaraha fiidiyowga waxay u egtahay inay abuurto xaaladdan, marka haddii aad rabto inaad ka saarto Fortnite hubi ...
Sida loo cusboonaysiiyo khariidada TomTom bilaash
Nidaamyada hagidda baabuurta ayaa si sii kordheysa loo isticmaalaa adduunka oo dhan, si loo daboolo baahidan waxaa jira codsiyo badan oo suuqa yaal. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qaar ka mid ah codsiyadan sida TomTom oo ku raaxaysta heer sare ...
Sida loo habeeyo TP-LINK Extender
Haddii aad haysato aaladda TP-LINK Extender oo aanad garanayn sida loo habeeyo, waxaad joogtaa meesha saxda ah, sababtoo ah halkan waxaad ka heli doontaa tillaabooyinka aad raacdo si aad u gaadho. Markaad gurigaaga ama xafiiskaaga ku leedahay meelo ay ku yaalaan signalka intarneedka bilaa-waayirka ah...
Fur kaadhka SD-ga ee qoraalka ah
Waqtigan xaadirka ah, dad badan ayaa dhib kala kulmaya koobiyaynta iyo u wareejinta faylasha kaararka SD-ga. Tani waxay sabab u tahay ilaalinta qorista ee qalabkan elegtarooniga ah ay leeyihiin. Waa in la ogaadaa in ilaalintan qorista ay tahay aalad ammaan oo ...
Si fudud u soo deji Skype bilaash
Haddii aad raadinayso App loogu talagalay fariimaha iyo wicitaannada qalabkaaga, ma jiraan wax ka fiican inaad soo dejiso Skype bilaash. Ma taasi baa, codsigani waxa uu noqday mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee lagula xiriiri karo qoyskaaga iyo asxaabtaada adigoo isticmaalaya ...
Inta badan codsiyada la isticmaalo si loo abuuro Android Animoji
Haddii aad haysato qalab Android ah oo aad rabto inaad ogaato sida aad u abuuri karto Animoji kala duwan, waxaad ku jirtaa meesha saxda ah. Sababtoo ah maanta waxaan kuu sharxi doonaa codsiyada kala duwan ee aad isticmaali karto si aad u sameysid. Sidoo kale, waxaad baran doontaa tallaabooyinka ...
Baro sida loo koobiyeeyo DVD-ga la ilaaliyo
Haddii aad raadineysay qaab aad ku koobi lahayd DVD-ga dhowrsan muddo dheer oo aadan weli ku guuleysan, waxaad gaartay blog-ka muujinaya. Sababtoo ah maanta waxaad ogaan doontaa barnaamijyada lagama maarmaanka u ah si loo gaaro, laga bilaabo qalabka aadka loo isticmaalo ee Windows si loo ...
Sida loo tirtirayo lambarada SIM
Haddii aad ka daashay in aad haysato lambaro telefoon oo dadka aanad hadda kala hadlin qalabkaaga oo xitaa haddii aad tirtirto ay sii muuqdaan, halkan waxaad ka heli doontaa xalka. Sababtoo ah waxaan kuu sharxi doonaa sida aad uga tirtiri karto xiriirada SIM ee aaladaha Android ...
Sida loo rakibo Kali Linux
Haddii aad ka daashay raadinta sida loo rakibo Kali Linux waxaad timid meeshii saxda ahayd, sababtoo ah maqaalkan waxaad ku arki doontaa sida loo gaaro. Maanta, waa wax caadi ah in isticmaaleyaal badan ay ku rakibaan nidaamka hawlgalka kombuyuutarkooda si ay u qiimeeyaan amniga ...
Sida loo ogaado taariikhda la iibsado moobilka
Haddii marar badan aad raadisay macluumaad ku saabsan Sida loo ogaado da'da mobaylka? oo ma liibaanteen, maanta nasiib baad leedihiin. Sababtoo ah maqaalkan waxaan ka jawaabi doonaa su'aashaas, anagoo ku siineyno dhammaan faahfaahinta ku saabsan beddelka kala duwan ee ...
Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka jecel waagii Cretaceous oo ku khiyaaneeya dinosaurs iyo sidoo kale jecel ciyaaraha fiidyaha, boostadani adigaa leh. Dhawaan, ciyaar fiidiyow cusub ayaa la sii daayay, Jurassic World Evolution, kaas oo, ...
Sida loo soo dejiyo ciyaaraha bilaashka ah ee Nintendo 3DS
Maalmahan, ciyaarista ciyaaraha fiidyowgu waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u dhaqaale badan sababtoo ah horumarka tignoolajiyada ee joogtada ah. Sidaa darteed, kaliya ma awoodi doontid inaad ka faa'iideysato soo jeedinta joogtada ah, laakiin sidoo kale waxaa suurtagal ah inaad soo dejiso ciyaaro badan oo tayo leh oo bilaash ah iyada oo loo marayo noocyo kala duwan oo ...